Dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhac ku yimid jadwalka doorashooyinka
Jadwalkan ayaa ku soo aadaya xilli maamul goboleedyada sida Hir-shabeelle aysan ka bilaaban weli doorashada xubnaha Aqalka sare, halka maamullada qaar ay bilaabeen oo ay weli qabyo ka tahay dhammeystirka xubnaha ku matali lahaa Aqalka sare.
MUQDISHO, Soomaaliya - Jadwalka doorashooyinka dadban ayaa mar kale fashilmay, taas oo sababtay in markii afaraad, ay dib u dhacaan doorashinka ay masuulka ka yihiin Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (GDHF), kuwaas oo hore dhowr mar u soo saaray jadwal ay ku sheegeen midkii ugu danbeeyay ee doorashooyinka.
Sida ku caddeed, jadwal ay wadajir u soo saareen, Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, 16-kii July 2021, wuxuu qorshuhu ahaa in doorashooyinka Aqalka Sare la so gabagabeeyo 28-kii July, Isla-markaana billawgii August la guda galo hannaanka Golaha Shacabka, kaas oo la madlay in la so af-meero billowga bisha October.
Hayeeshee, Jadwalkaas ayaa fashilmay, waxaana xalay la soo saaray shax cusub, oo lagu soo bandhigay jadwal doorasho oo si weyn kaga gaddisan kuwii hore, kaas oo sheegaya in dhamaadka bisha November ee sanadkaan la gunaanadayo doorahada Golaha Shacabka.
Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa hore loo qorsheeyay in la qabto 10-ka October, hayeeshee, qorshahaas ayaa meesha ka baxay, waxaana doorashada kuriga dalka ugu sarreeya la qaban karaa dhamaadka Decemper ama billowga snadka cusub.
21 June 2021, Keydmedia Online, waxa ay baahisay, in bilaha August iyo September, la soo af-meeri doonaa doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya, halka dhamaadka September, October iyo billawga November la soo gabagabeyn doonto doorashada Aqalka hoose ee BJFS.
Maamulka HirShabeelle, ayaa maalmahaan laga filayaa in ay ka dhacdo doorashada kuraasta Aqalka Sare, halka Galmudug iyo Jubbaland looga fadhiyo in ay dhameystiraan kuraasta dhiman.